Warar - Mashiin Teknolojiyad Cusub Leh Oo Loogu Talo Galay Gawaarida Gawaarida
Mashiin leh Teknolojiyad Cusub oo loogu talagalay Gawaarida Gawaarida
Wareegyada giraangiraha leh labada dhinac ee gawaarida hoose (jir) ayaa si wada jir ah loogu yeeraa gawaarida gawaarida, iyo geesaha leh awoodda wadista guud ahaan waxaa loo yaqaan 'axles'. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya labadooda ayaa ah inuu wado kujiro dhexda dhexdeeda (axle). Warqadan, gawaarida gawaarida leh ee wadata qeybta waxaa lagu magacaabaa gawaarida gawaarida, gaariga aan wadida lahayn waxaa loo yaqaan 'axle automobile' si loo muujiyo farqiga.
Iyadoo baahida sii kordheysa ee loojistikada iyo gaadiidku ay sii kordheyso, dariiqooyinka gawaarida gawaarida, gaar ahaan isjiidka iyo gawaarida nus-jiifka ah, ee gaadiidka xirfadleyda ah iyo howlaha gaarka ah ayaa si aad ah u soo badanaya, dalabka suuquna aad ayuu u kordhay
Falanqaynta tiknoolajiyadaani waxay ku shaqeyneysaa geedi socodka mashiinka dhejiska, waxay rajeyneysaa inay ka caawiso macaamiisha inay doortaan mashiinka CNC ee ku habboon.
Nidaamka wax soo saarka cusub ee gawaarida guud:
Laga soo bilaabo habka wax soo saarka cusub, Mashiinka wax lagu shiido ee loo adeegsado makiinada (dariiq adag) ama mashiin caajis laba-geesle ah (axle godan ah) oo lagu daray lathe CNC, axdi qarameedka OP1, OP2, OP3 isku xigxiga leexashada, iyo xitaa OP5 qodista iyo qodista Waa la beddeli karaa by lathe CNC laba geesood OP1.
Meelaha adag ee udubdhexaadka u ah halka dhexroorku uusan u baahnayn demin, dhammaan waxyaabaha ka kooban mashiinnada waxaa lagu dhammaystiri karaa hal meel, oo ay ku jiraan meelihii muhiimka ahaa ee la shiilay iyo godad shucaac ah. Wareegyada godadka ah ee dhexroorku uusan u baahnayn demin, heerka isku-haynta is-beddelka tooska ah ayaa lagu xaqiijin karaa aaladda mashiinka, iyo waxyaabaha ka kooban makiinadda waxaa lagu dhammaystiri karaa hal qalab mashiin.
Xullo gees-geesle khaas ah oo loo yaqaan 'CNC-double-end axle lathes' si loo masaxo fiilooyinka si weyn u soo gaabiyo dariiqa makiinadda, nooca iyo tirada qalabka mashiinnada la soo xulayna sidoo kale waa la dhimi doonaa.
Faa'iidada iyo muuqaalka mashiinka xulashada nidaamka cusub:
1) Isku soo uruurinta geedi socodka, yaraynta waqtiyada iskudhafka workpiece, yaraynta waqtiga ka shaqeynta kaabayaasha, iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada isku dhafan ee labada dhinacba, waxsoosaarka wax soo saarka si weyn ayaa loo hagaajiyay
2) Isku-xirxirasho hal-mar ah, isku-shaandheyn isku mar ah labada dhinacba waxay hagaajineysaa saxnaanta mashiinka iyo wadajirka ulaha.
3) In la gaabiyo howsha wax soo saarka, la yareeyo wareejinta qeybaha goobta wax soo saarka, la wanaajiyo waxtarka isticmaalka goobta, lagana caawiyo hagaajinta abaabulka iyo maaraynta wax soo saarka.
4) Isticmaalka qalabka wax soo saarka waxtarka sare leh, waxaa lagu qalabeyn karaa aaladaha rarka iyo dejinta iyo aaladaha keydinta si loo gaaro wax soo saar si otomaatig ah u shaqeeya loona yareeyo kharashka shaqaalaha.
5) Qalabka shaqada ayaa lagu dhejiyaa booska dhexdhexaadka ah, isku xirku waa mid lagu kalsoonaan karo, iyo miisaanka loo baahan yahay jarista qalabka mashiinka ayaa ku filan, iyo tirada badan ee leexinta ayaa la samayn karaa.
6) Qalabka mashiinka waxaa lagu qalabeyn karaa aaladda ogaanshaha otomaatiga ah, gaar ahaan dariiq dhexaad ah oo godan, kaas oo hubin kara dhumucda isku midka ah ee dhejiska ka dib marka la farsameeyo.
7) Meelaha banaan, marka godadka hoose ee labada daraf ee taxanaha OP1 la dhammeeyo, macaamilka dhaqameedku wuxuu isticmaali doonaa hal daraf si kor loogu qaado isku haynta iyo dhamaadka kale inuu u adeegsado dabada si uu u adkeeyo qalabka shaqada si uu u soo jeesto, laakiin cabirka daloolka gudaha waa ka duwan yahay. Daloolka yar ee gudaha ku yaal, adkaanta adkaynta ayaa ku filnayn, mashiinka adkeeya ee dusha sare kuma filna, goyn wax ku ool ahna lama dhammaystiri karo.
Lathe cusub oo laba-waji ah, dariiq dhexaad ah, marka godadka hoose ee labada daraf ee gaariga dhammaadaan, mashiinku wuxuu si otomaatig ah u beddelayaa habka isku-haynta: labada daraf waxaa loo isticmaalaa in lagu adkeeyo qalabka shaqada, darawalka dhexe-na wuxuu dul sabeyaa goobta shaqada. si loo gudbiyo tiirarka.
8) Qalabka madaxa ee lagu dhejiyo qalabka wax lagu xiro ee loo yaqaan 'hydraulic clamping workpiece' ayaa loo wareejin karaa jihada Z ee mashiinka. Macaamiilku wuxuu ku hanan karaa booska tuubada laba jibbaaran (tuubada wareega), booska saxanka hoose iyo booska dhexroorka usheeda dhexe sida loogu baahdo.
Marka la eego xaalada kor ku xusan, isticmaalka lathes-ka laba-dhamaadka ah ee loo yaqaan 'CNC lathes' oo loogu talagalay mashiinnada gawaarida gawaarida ayaa leh faa'iidooyin muhiim ah hababka dhaqameed. Waa tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan oo beddeli karta qalabka mashiinka dhaqameed marka la eego habka wax soo saarka iyo qaab dhismeedka mashiinka.